Iyadoo Jean-Marc Pairraud, la soco caqliga shucuurta. Eeg sida loo horumariyo iyo sida looga faa'iideysto. Marka hore, waxaad baran doontaa waxa shucuurtu yihiin iyo waxa halista ku jira. Waxaad baran doontaa sida loo xakameeyo loona xakameeyo shucuurtaada, markaa waxaad sidoo kale baran doontaa inaad la macaamisho shucuurta dadka kale adoo u muujinaya naxariis. Tababarkani wuxuu ku dhamaan doonaa toban talooyin oo aad ku dhaqanto si aad u kobciso una hanato caqligaaga shucuurta.
Horumari caqligaaga shucuurta Diisambar 12, 2020Tranquillus
READ Kordhinta qaybta waxqabadka waxqabadka iyo caddaynta dhaarta: qaybaha cusub ee waxqabadyada ay khusayso
horeJeff Weiner - Maareyn naxariis leh
socdaTababar Lacag La'aan ah: Baro Suuq-geynta Shirkadda